GAROWE, Puntland- Xaflad lagu qabtey Hoolka Jaamacada Barriga Afrika magalaada Garowe ayaa Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas lacag gaareysa 3.5 dollar ku wareejiyey mashruuca dhismaha garoonka diyaardaha Garowe iyo waddada Ceel-Daahir Baran.
Xafladaan oo ay ka hadleen saraakiil ka tirsan dowlada iyo qaar ka kamid ah Issimada gobolka Nugaal iyo Barri ayaa waxaa loogu mahadceliyey Madaxweynaha Puntland in lacagtaas ku bixiyo dhameystirka Mashaariicdaan.
Lacagta dowlada Puntland ku bixisay dhameytirka mashaariicdaan ayaa waxaa horey u bixisay (Bonus) shirkada DP world markii ay heshiiska lagu horumarinayo dekada Bossaso dhowaan la saxiixdeen madaxweyne Gaas. Lacagtaan oo gareysay 10 Milyan dollar ayaa loogu talagalay in dowlada Puntland u isticmaasho hurumarinta kaabayaasha dhaqalaha iyo kabidda misaaniyada maamulkaas.
Mashruuca dhismaha garoonka diyaardaha magaalo madaxda Puntland ayaa waxaa wajigiisii koowaad bixisay hay'adda Kuwait Fund balse waxaa dib u dhac ku yimid wajigii labaad taasoo khasabtey in Madaxweynaha Puntland lacagta uu ka heley wadanka Imaraadka Carabta u weeciyo dhameytirka mashruucaan.
Shirkada DP World oo laga leeyahay Wadanka Imaraadka Carabta ayaa heshisyo lagu hurumarinayo dekadaha magalaada Bossaso iyo Berrbera horey ula gashay maamulada Puntland iyo Somaliland.
Dhinaca kale dowlada Puntland ayaa ku biirisay dhismaha wadada isku xireysa Ceel-Daahir iyo magalaada Baran ee gobolka Sanaag lacag gaareysa 1 Milyan dollar.
Wadada isku xireysa tuulada Ceel Daahir iyo degmada Baran ayaa dhererkeedu yahay 90 KM.
Dhismaha wadadaan oo dowlada uu Madaxweynaha ka yahay Cabdiweli Maxamad Cali Gaas bilowdey ayaa lacagtiisa waxaa horey ugu tabarucey shacabka Puntland halka dakhliga dowlada ee kasoo baxa dekada Bossaso lacag loo looga jaro.
Dadweynaha Puntland gaar ahaan kuwa gobolada Nugaal iyo Barri ayaa aad u soo dhoweeyey in dakhliga laga heley dalka Imaraadka shirkadihiisa lagu bixiyo dhameystirka mashaariicdaan halka madaxweyne Gaas lagu bogaadiyey in lacagtaan qayb kamid ah u weeciyo dhameytirka mashaariicdaan.
Soomaliya 23.06.2017. 00:23
Mulkiilihii shirkada Blackwater Erik Prince islamarkaana hadda madax ka ah shirkado isu tagey oo qabta adeegyo kala duwan " Frontier Service Group" taasoo ay ku jiro sugidda amniga, ayaa maalinimadii Khamiista shaacisey 23/06/2017 iney heahiis dhinaca Logistikada, ar ...
DP World oo lagu wareejiyay Dekadda Berbera
Somaliland 11.05.2017. 19:49